यस्तो छ राजश्री फिल्म्सको नाम कहानी - बलिउड - साप्ताहिक
‘मेरो नाम कमल र मेरो भाइको नाम राज हो, तर पनि मेरी बहिनी राजश्रीको नामबाट प्रोडक्सनको नाम तय भयो ।’
‘हाम आपके है कौन’ जस्तो चलचित्र बनाउने राजश्री फिल्म्सको नाम कसरी रह्यो । यशराज फिल्म्सको नाममा ‘यश’ नाम यश चोपडाको हो भने ‘राज’ कहाँबाट आयो ? दीपिकाको प्रोडक्सन हाउसको नाम ‘का प्रोडक्सन’ किन रह्यो ? यी विषय चलचित्रप्रति चासो राख्ने दर्शकका लागि कौतूहलको विषय हो ।
बलिउड र हलिउडका चर्चित प्रोडक्सन हाउसको ‘लोगो’ र कम्पनीको नाम कसरी जुरे भन्ने विषयमा केही जानकारी लिऔं । कुनै प्रोडक्सन हाउसको चलचित्र, चलचित्र कम्पनीको नाम र लोगो उसको पहिचान हुन्छ ।
हालै मात्र धर्मा प्रोडक्सनले आफ्नो पहिचान परिवर्तन गरेको छ । करण जोहारको धर्मा प्रोडक्सनले ‘कुछ कुछ होता है’, ‘कभी खुसी कभी गम’ र ‘कल हो न हो’ जस्ता चलचित्र बनाएको छ । आफ्नो आउन लागेको फिल्म ‘भूत–पार्ट वन : द हन्टेड सिप’को प्रमोसनका लागि धर्मा प्रोडक्सनले आफ्नो लोगोमा नै केही परिवर्तन ल्याएको हो । उसले लोगोको रंगमा परिवर्तन गरेको छ भने उसले आउने संगीतलाई डराउने किसिमको बनाइदिएको छ ।
करणले आफ्नो कम्पनी धर्मा प्रोडक्सनको ट्विटर एकाउन्टको लोगोलाई कालो बनाइदिएका छन्् र कभर स्टोरीमा ‘डार्क टाइम्स बिगिन नाओ’ लेखेका छन् । चलचित्र ‘भूत–पार्ट वन : द हन्टेड सीप’मा विक्की कौशल र भूमि पेडनेकरले मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका छन् ।
यसै वर्ष दीपिका पादुकोण चलचित्र ‘छपाक’बाट निर्मात्री बनिन् । उनको प्रोडक्सन हाउसको नाम का प्रोडक्सन्स हो । ‘काको अर्थ अन्तरआत्मा हो । तपाईंको मृत्युपछि पनि तपाईंको आत्मा यो विश्वमै रहन्छ । सायद म पनि यही चाहन्छु कि मेरो निधनपछि मेरो काम यही रहोस् र म त्यस्तो काम गर्छु कि मानिसले मलाई सम्झिइरहून्’, दीपिका भन्छिन् । दीपिकाले चलचित्र बनाउनका लागि जति पैसा लगानी गरिन्, त्योभन्दा ज्यादा उनले कमाइन् र दर्शकले चलचित्र पनि रुचाए । एसिड आक्रमणबाट पीडित लक्ष्मी अग्रवालको जिन्दगीबाट प्रेरित चलचित्र ‘छपाक’को निर्देशन मेघना गुलजारले गरेकी हुन् ।
राजश्री फिल्म्सका सुरज बडजात्याले ‘हम आपके हैं कौन’, ‘मैंने प्यार किया’ र ‘हम साथ–साथ हैं’ जस्ता पारिवारिक चलचित्र निर्माण गरे । राजश्री प्रोडक्सन्सको सुरुवात गर्ने ताराचन्द बडजात्याका छोरा कमलका अनुसार प्रोडक्सनको नाम राख्ने बेलामा सुरुवाती नाम राज–कमल थियो । ‘मेरो नाम कमल र मेरो भाइको नाम राज हो, तर पनि मेरी बहिनी राजश्रीको नामबाट प्रोडक्सनको नाम तय भयो’, कमलले भनेका छन् । जब राजश्रीको चलचित्र सुरु हुन्छ, त्यहाँ सरस्वती माताको प्रतिमा अगाडि आउँछ । यसभित्रको रहस्य पनि कमलले खोलेका छन् । ‘पिताजी सरस्वती मातालाई धेरै मान्नुहुन्थ्यो । उहाँ जुन चलचित्र बने पनि पूरा परिवारले हेर्ने किसिमको बनोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । त्यसकारण पनि सरस्वती मातालाई स्थान दिएका हौं’, कमल खुल्छन् ।
आरके फिल्म्सको सुरुवात राज कपुरले १९४८ मा सुरु गरेका थिए । आरके फिल्म्स एन्ड स्टुडियोजका लागि राज कपुर र नरगिसले सँगै धेरै चलचित्रमा काम गरे । यी दुईबीचको निकटतम सम्बन्धले पनि निकै चर्चा पायो । आरके फिल्म्स र स्टुडियोजको पहिलो चलचित्र ‘आग’ले बक्सअफिसमा खासै कमाल गर्न सकेन, तर दोस्रो चलचित्र ‘बरसात’ले सफलता पाएसँगै उनीहरूको पहिचान पनि बन्यो ।
सन् १९४९ मा रिलिज राज कपुर र नरगिसको चलचित्र ‘बरसात’को पोस्टरमा चलचित्रकै एक दृश्यको तस्बिर राखिएको थियो, जसमा राज कपुरले एक हातले नरगिसलाई समाएका थिए भने अर्को हातमा भ्वाइलिन थियो । यही तस्बिरलाई आधार बनाएर आरके फिल्म्सले लोगो बनाएको थियो । मुम्बईको चेम्बुरमा रहेको आरके फिल्म्सको अन्तिम चलचित्र ‘आ आब लौट चले’ थियो, जुन चलचित्र सन् १९९९ मा बनेको थियो ।
यशराज फिल्म्सको सुरुवात चलचित्र ‘दाग’बाट भएको थियो । सन् १९७३ मा रिलिज यो चलचित्र निर्माता यश चोपडाको पहिलो चलचित्र थियो । यो चलचित्रको कथा चलचित्र सकिएसँगै अभिनेताका साथ दुई अभिनेत्री घर जान्छन् । त्यसकारण यो समयमा यही दृश्यका कारण चलचित्रलाई निकै जोखिम मानिएको थियो, तर यो चलचित्रप्रति यश चोपडा र राजेश खन्ना एकआपसमा भर परेका थिए । भनिन्छ, यो चलचित्र निर्माण हुनका लागि राजेश खन्नाको ठूलो योगदान थियो । त्यसकारण पनि यशराजमा ‘राज’ नाम राजेश खन्नाबाट लिइएको भनाइ छ ।
बाम्बे टाकिजको स्थापना हिमांशु राय, देविका रानी र राज नारायण दुबेले गरेका थिए । सन् १९३४ मा बाम्बे टाकिजले काम गर्न सुरु गरेको थियो । यसको लोगोमा हिमांशु राय र राज नारायण दुबेको तस्बिर छ ।
राजनारायण दुबे एक ठूला व्यापारी थिए र उनले नै यो प्रोडक्सन हाउसमा पैसा लगानी गरेका थिए । हिमांशु राय निर्माता, निर्देशक र अभिनेता थिए, जसले अभिनेत्री देविका रानीसँग विवाह गरेका थिए । देविका रवीन्द्रनाथ टेगोरकी आफन्त थिइन् । हिमांशु रायले साइलेन्स चलचित्र पनि बनाएका थिए । दिलीप कुमार, अशोक कुमार र मधुबालाले बाम्बे टाकिजबाट आफ्नो करियरको सुरुवात गरेका थिए । यो प्रोडक्सन हाउसमा राज कपुर, सत्यजित रे, विमल राय र किशोर कुमारले पनि काम गरेका थिए ।
हलिउड चलचित्रका प्रोडक्सन कम्पनीको लोगोका पछाडि पनि रोचक कथा र सोच छ । ‘एमजीएमको लोगोमा एउटा सिंह छ । यो बीसौं शताब्दीको सुरुवातमा बनाइएको थियो । यो कम्पनीको मुख्य प्रचारक हार्वर्ड डाइटसले कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट अध्ययन गरेका थिए । उसको चिह्न अर्थात् शुभंकरबाट प्रभावित भएर एमजीएमको लोगोमा एक सिंह लगाइएको थियो ।
प्रकाशित :माघ २७, २०७६
इन्टरपोल : नाम कति ? काम कति ?
प्रमोद खरेलको यस्तो घोषणा